Shandong XinhaoHD International Trade Co., Ltd waa shirkadda dhamaystiran oo-soo-saarka iyo ganacsiga ee Shiinaha. Shayga ka kooban taxane oo dhan hoos ku qoran ama mashiinada isuga baadkiisa 1600mm siman, mashiinada habboon, mashiinada alxanka koore-qaabeeya, mashiinada goynta beebka caaga ah, iyo kaabayaal ah oo gaar ah oo kala duwan tools.We sidoo kale iibiso HDPE biibiile sahayda biyaha, iyo biibiilaha ku milmaya, tuubooyinka gaaska, hurinta xakamaynayay andantistatic biibiile macdanta iyo biibiile kaabayaal rakiban, floater, manhole caag ah oo si mashiinada on.Our ayaa si weyn u isticmaala biibiile oo kala duwan, soo saaridda habboon, shirkadaha gaasta iyo biyaha, urur xirfadeed dhismaha. Waxaan helay fadilay waxqabadka qiimaha wanaagsan oo tayo leh oo lagu kalsoonaan karo labada gudaha iyo dibaddaba.
Waxaan baaqbaaq shaqaynta xirfad horumarinta farsamada, maamulka-soo-saarka, wax soo saarka iyo iibinta. La aasaasay xiriirka iskaashi fiican la machadyada cilmi-baarista gudaha, kala duwan ee isticmaala PE, urur xirfadeed dhismaha. Horumarinta wax soo saarka, hal-abuurnimo farsamada, casriyeyn wax soo saarka, waxaan ku jirnaa keentay heerka qoyska.
Waxaan leenahay faa'iido aad u weyn in hantida, technology, maamulka, tayo, maalgashiga. In warshadaha qoyska, aan ku guuleysano kaalinta koowaad. Si diiran u soo dhoweeyay safraya baayacmushtariyaasha, saaxiibadaa si ay u fuliyaan on baaritaan iyo wada xaajoodka. In la sameeyo dhaqaalaha iskaashiga, Abuur cajiib ah.